Wenger Oo Shaaciyey Inuu Wax Walba U Horayo Joogidda Alexis Sanchez
HomeWararka MaantaWenger Oo Shaaciyey Inuu Wax Walba U Horayo Joogidda Alexis Sanchez
Tababare Arsene Wenger ayaa ka hadlay sababtii uu kursiga kaydka u fadhiisiyey xiddiga Alexis Sanchez ciyaartii Chelsea ee lugta koowaad ee semi finalka tartanka League Cup ee dhowaanta loo bixiyey Carabao Cup.
Tababaruhu waxa uu sheegay in Sanchez uu kulamo badan oo xidhiidh ah ciyaaray, taas daraadeedna uu u baahnaa wakhti kooban oo nasasho ah, hase yeeshee, waxa uu dhinaca kale tilmaamay inuu ka shaqaynayo sidii uu laacibkani wakhti dheer ugu sii ciyaari lahaa Arsenal.
“Waxaan doonayaa inuu wakhti dheer sii joogo, dhibaatona ma laha haddii iminka saxeexo heshiis iyo haddii uu June saxeexo ba” Sidaas ayuu yidhi Tababare Wenger oo saxaafadda la hadlay markii ay dhamaatay ciyaartii barbar-dhaca ay wada galeen Chelsea.
Arsene Wenger oo hadalkiisa sii wata, waxa uu tilmaamay in Sanchez ay tahay inuu aqbalo in ciyaaraha qaarkood kaydka la dhigo, sababtoo ah waxa uu ciyaaraa kulan kasta, taas oo haddii wakhti nasasho la siiyo ay isaga ka caawinayso in jidhkiisu kasoo kabto daalka badan.
Inkastoo mustaqbalka Sanchez ee Arsenal uu laalan yahay maadaama heshiiskiisu dhacayo badhtamaha sannadkan, haddana Wenger waxa uu tilmaamay in dadku aanay aqoon fiican u lahayn laacibkan reer Chile oo mar kasta ku foogan ciyaarta.
“Dadku ma yaqaanaan Alexis Sanchez – Wiilkani waa mid dhamaystiran oo dareenkiisu yahay ciyaarista kubadda cagta. Miyaad arkayseen sidii uu maanta ahaa? Sidii uu isku kululeeyay? Sidii ciyaartoy doonaya inuu kubadda cagta ciyaaro. Waxa uu isbeddel ku samayn karaa waxa ka dhacaya garoonka gudihiisa iyo dibeddiisaba. Waxa aanu ku noolahay xaqiiqada, ma aha tilmaamaha cilmi-nafsiga. Marka aad garoonka timaado, waa inaad kubadda ciyaarto 100%, sidaas ayaanu sameeyaa.” Sidaas ayuu yidhi Arsene Wenger.
Belgium vs Japan 1-0 – Highlights & Goals
Real Madrid Oo Ka Hadhi La’ Barcelona Iyo Torres Oo badbaadiyey Atletico Madrid
30/04/2015 Abdiwahab Ahmed